मजदुर बलिदान दिवस के हो र किन मनाउँने ?
मजदुर बलिदान दिवस भुईंमान्छेको गर्विलो इतिहास हो
जय कार्की प्रकाशित मिति : बिहिबार, फाल्गुन ९, २०७५
मजदुर बलिदान दिवस तत्कालीन नेकपामा माओवादीले संचालन गरेको जनयुद्धको क्रममा प्रतिक्रियावादी साही सत्ताद्धारा हत्या गरिएका मजदुरहरुको संझनामा मनाईने राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम हो । यो मजदुर बलिदान दिवस अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले फागुन ११ गतेका दिन देशब्यापीरुपमा मजदुर शहीद, बेपत्ता पारिएका तथा घाईते अपाङ्ग भएका श्रद्धेय मजदुर नेताहरुको संझनामा मनाउँदै आएको छ । महासंघले आफनो क्षमता अनुसारका आर्थिक तथा भौतिक एवं नैतिक सहयोग र समर्थन गर्दैै आएकोछ र परिवारका सदस्यहरुलाई रोजगारी तथा शिक्षाको अवसर पनि प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
फागुन ११ गते नै किन मनाउने ?
२०६० सालको फागुन ११ गतेका दिन कालिकोटको निर्माणाधिन बिमानस्थल कोटबाडामा धादिङ जिल्लाको हालको बेनिघाटरोराङ गाउपालिका वडा नम्बर १० का १७ जना निर्माण मजदुरहरु बेल्चा, गैंची लगायतका औजारहरु प्रयोग गरी निर्माणस्थलमा कार्यरत रहेको बेलामा माओवादी लडाकुहरु हातहतियारसहित जम्मा भएको ठानेर सेनाले हेलिकप्टरबाट गोली प्रहार गरी सबै मजदुरहरुको हत्या गरेको थियो ।
तरपछि घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान गर्दा उनीहरु सबै निहत्था निर्माण मजदुर मारिएको फेला परेको थियो । हो, तिनै निहत्था निरपराध मजदुरहरुको हत्या गरेको दिनलाई नै मजदुर बलिदान दिवसको नामाकरण गरेको हो । मजदुर बलिदान दिवसको एकीकृत नाम दिनुभन्दा अघि उपाध्यक्ष शहीद शंभु पौडेल स्मृति दिबस लगायत दुई दर्जनभन्दा बढि मजदुर शहीदहरुको छुट्टाछुट्टै स्मृति दिवस मनाईने गरिएको थियो । अलिपछि आएर अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको केन्द्रीय बैठकमा तत्कालीन अध्यक्ष शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबै शहीद श्रमिकहरु तथा वेपत्ता पारिएका श्रमिक नेताहरुको संझनामा एउटै दिवस प्रभावकारी ढंगले मनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
स्मररणीय कुरा के छ भने महासंघका पचासजनाभन्दा धेरै होनहार मजदुर नेताहरु प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले हत्या गरेको थियो । उनीहरुको बलिदान खेर गएको छैन । उनीहरुको बलिदानका कारणले नै देश अब संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीेभन्ने नाराका साथ नयाँ बिकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । र, नेपाली श्रमिकहरुका लागि सबै खाले कानुनको निर्माण भएर पनि लागू भैसकेको छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आउनुलाई नयाँ युगको प्रारम्भ भनिएको छ र हो पनि ।
अहिले पनि बेनी–रोराङ गाउँपालिकामा १७ जना कोटबाडामा हत्या गरिएका शहीदहरु र धादिङ जिल्लाका शहीदहरुको संझनामा मुख्य कार्यक्रम गरी भव्यरुपमा मनाउने गरिएको छ । स्मरणीय छ सोही गाउँपालिकामा अनेट्रेयु महासंघले मजदुर शहीद स्मृति पार्क निर्माणको लागि जमिन पनि खरीद गरेको छ र निर्माणको क्रममा रहेकोछ । यसपटक पनि त्यहीं फागुन ११ गतेका दिन निकै भव्यतापुर्वक मजदुर बलिदान दिवसको आयोजनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
फोटो फाईलः ३ बर्ष अघि बेनीघाटमा भएको मजदुर बलिदान दिवस शहीद परिबारका साथमा पार्टी नेता क.पुष्पविक्रम मल्ल तथा महासंघका केन्द्रीय नेताहरु ।
यसका अतिरिक्त काठमाडौ, चितवन, पोखरा, नेपालगंज, मोरङ, जनकपुर, बिरगंज, प्रदेश छ र सात लगायत सबैस्थानमा आयोजना गरि शहीद तथा वेपत्ता परिवारलाई यथासक्य सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको छ । काठमाण्डौमा महासंघको कार्यालयमा मनाउने तयारीस्वरुपम तयारी बैठकहरु बस्तैछन भने पोखरा,विराटनगर, चितवन, नेपालगंजमा पनि कार्यक्रमको तयारी भैरहेको खबरहरु आएका छन् । हामी भूई मान्छेहरुको मित्र हौं परिवर्तनका औजार हौं । त्यसकारण मजदुर बलिदान दिवस गौरबमय इतिहास हो । भुईंमान्छेको गर्विलो इतिहास हो ।
मजदुर बलिदान दिवस शहीदहरुको संझना गर्ने दिनमात्र होईन । उनीहरुले के उदेश्यका लागि शहीद हुनुपरेको थियो । त्यो उदेश्यहरु के कतिसम्म पुरा भयो ? नभएको भए कारण के हो ? सो बाँकी रहेको विषयको गंभ्भीर समीक्षा गरी ती उदेश्य पूर्तिको लागि अझ संगठित आन्दोलनमा जुट््नु आवश्यक छ । हामीले यहाँ माथि बताए जस्तो केही कानुनहरु श्रमिकवर्गको पक्षमा बनेका छन तर कार्यान्वयन नभएको खण्डमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमाथि पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । सैद्धान्तिक आधारमा अझ मजबुत हुँदै जानुपर्ने अवस्थामा नैतिकबल ह«ास हुने तथा संगठनलाई निरास र बदनाम हुने कामबाट रोक्नु र नैतिकरुपमा कसैले औंला ठडयाउन नसक्ने संगठनको निर्माण गर्ने विषयलाई मजदुर बलिदान दिवस मनाईरहेको सन्दर्भमा प्रतिज्ञारत रहनु श्रद्धेय शहीदहरु प्रति बफादार रहनु हो । त्यो प्रण हामीले आत्मैदेखि गर्नु जरुरी छ भने शहीद परिवारलाई सम्मानका रुपमा पुजिनुपर्छ न कि बोझिलो भारीको रुपमा ग्रहण गर्ने हो ।
हाम्रो के अनुरोध छ भने सबै क्षेत्रबाट प्रामाणिक नामावलिहरु र शहीद तथा बेपत्ता पारिएका मजदुर नेता तथा कार्यकताहरुको अभिलेख पठाई सहयोग गरिदिनु भयो भने हामी एउटा छुट्टै पुस्तक प्रकाशन गर्ने जमर्को गर्नेछौँ । के सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने आजैैबाट केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन सुरु गर्नुहोस या फेसबुक वालमा लेखेर सहयोग गर्नुहोस ।